အဖြေ……….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဖြေ………..
ကျွန်မ ၏ အချစ်နန်းတော်
မောင့်အတွက် ကျွန်မ ရဲ့ဝိဥာဉ်
ကျွန်မ ရဲ့ နှလုံးသား
ကျွန်မ ရဲ့ အသက်
အလဲ့ တူများရဲ့မောင် သူလုသွားတယ်…
မောင်ရေ… သူနှင်းအပ်တဲ့ အသဲနှလုံးလို ပုလဲလုံးလိုလုပ်ပြီး အခိုင့်ရင်မှာလာဆွဲပေးပါလား
မောင်နဲ့အတူ သူရဲ့အသက်ကို ဂဟေဆက်လို့ ရွှေလက်တွဲလိုက်ကြရအောင်နော်
မောင်သာ သူ့ဘ၀ဆို သူ့ကိုခုတုံးလုပ်ပြီး မောင်နဲ့ ပျော်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်နွဲလိုက်ချင်တယ်…..
သူများရဲ့မောင်က အပြွတ်မောင်နဲ့ မတူပါဘူးနော်။ သူများမောင် က handson ဟိ။ တူရင်ဖြင့် သီရိဆွေ သီချင်းဆို ပြစ်လိုက်မယ်။ “သူငယ်ချင်း ရန်သူ” တဲ့ ……..နင်လိုက်ကပ်နေတာ ဘယ်သူရည်းစားလဲ………. မင်းသိဖို့ကောင်းတယ်။ …နင်ငါ့ကို best friend တဲ့ ………နင်ငါ့ကို best friend တဲ့။ ဟီးဟီးစတာနော်။ စိတ်ဆိုးလား……..
သူများရဲ့မောင်က အပြွတ်မောင်နဲ့ မတူပါဘူးနော်။ သူများမောင် က ယောင်္ကျားပြီသတဲ့ အဆင်လေး ဟိ :P။ တူရင်ဖြင့် သီရိဆွေ သီချင်းဆို ပြစ်လိုက်မယ်။ “သူငယ်ချင်း ရန်သူ” တဲ့ ……..နင်လိုက်ကပ်နေတာ ဘယ်သူရည်းစားလဲ………. မင်းသိဖို့ကောင်းတယ်။ …နင်ငါ့ကို best friend တဲ့ ………နင်ငါ့ကို best friend တဲ့။ ဟီးဟီးစတာနော်။ စိတ်ဆိုးလား……..
ဒီတလော မောင် တွေ တော်တော် ခေတ်စားနေပါလား။
မောင် ခေတ် ဖြစ်နေပါကောလား..
ခိုင်ခိုင် ကလည်း မောင်
ရိုစ်မင်း ကလည်း မောင်
အီးတုံး ကလည်း မောင်
လွှာ ကလည်း မောင်
နောက်ထပ် ဘယ်သူတွေ ရှိသေးလဲ..
ဒီတလော တွေ့မိတာလေး စုစည်းကြည့်တာ..
မမဆူးရော ဘယ်လိုခေါ်လဲဟင် ??
ဆူး က ချစ်စနိုးနဲ့.. နာမည်ပဲ ခေါ်တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကတော့ တော်တော် သြဘာပေးကြတယ် ကဗျာဆန်လိုက်တာနဲ့..
စကားပြောရင် နင်နဲ့ ငါနဲ့..ပြောတယ်။
ယုံဘူး ယုံဘူး နောက်တစ်ခါ တွေ့ဆုံပွဲကြရင် ခေါ်လာခဲ့မှ ယုံမယ်
ခေါ်ချင်ပါတယ်။ အခွင့်အခါ သင့်ရင် ကို မိတ်ဆက်ပေးပ့ါမယ်။
ကိုပေ .. ဒါကြောင့် ရွာထဲ လျှောက် မ ရှုပ်ပါနဲ့၊သူကြီးမျက်နှာ အိုးမဲ မသုတ်ပါနဲ့ ပြောထားတာ .. မရဘူး .. အခုတော့ .. အခုတော့ .. နောက်တစ်ယောက် ထပ်ပေါ်လာပြန်ပြီ …..
တားတားလဲ မောင် ဟောင်ဟောင်ဟောင် ပဲလေ………
ဟိတ် အစ်မဆူး … လျှောက်ပြောရဘူး … ဟိဟိ
etone က တစ်ခါ တစ်လေမှပါ ……… အမြဲလိုလိုခေါ်ဖြစ်တာ တခြား နာမ်စား …
ဟိုအရင်က မောင် ခေါ်တဲ့ နှမ
ဂေဇက်မှာ မောင် အတင်များတော့
လွှာနဲ့အခိုင်၊ အိတုံ ရို့စ်မင်း
ဟီးဟီး အလကားစတာ………တားတား မန်းချင်လွန်းလို့ ကြိုးစားစပ်ထားတာပါ………ရေတွင်းပျက်ပါ…….
အလွှာအခိုင် ၊ အိတုံ နဲ. မမအုံ
သင့်ကိုမောင် ခေါ် တောင်ပေါ်တက်မယ့်သူက ရှိပြီးသာပေမို.
ရုံးဖယ်ရီသာ မှန်မှန်စီးပေတော့ …….
အော် လတ်စသတ်တော့ မိအုံ….ငါ့ရည်းစားဟာ သူ့ရည်းစားဖြစ်နေတယ်….
မင်းရည်းစားတောင် သိရဲ့လား မင်းရည်းစားတောင်သိရဲ့လား… အချစ်ဆုံးနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းက အချစ်ဆုံးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ် အချစ်ဆုံးတော့မဟုတ်ပေမယ့် အချစ်ဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်…..
မောင်ရေ မောင် ဆိုတဲ့ နံမည်လေးကို အပိုင်ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင် မောင် ကိုကျွန်မတစ်ယောက် တည်းခေါ်ချင်တယ် ”မောင်“ မောင်သာကျွန်မအချစ်ဦး ဘယ်သူကိုမှမချစ်ဘူး ရှင်ယုံချင်လည်း ယုံတော့ မယုံချင်လည်းနေတော့ မောင်သာကျွန်မအချစ်ဦး…ကဲအားလုံးရှင်းတယ်နော် ……
မောင်ခေါ်ချင်တာများ အခိုင်ရယ် အဲလောက် မစိုးရိမ်ပါနဲ…….
အခိုင်အိမ်ရောက်ရင်…….. ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့် မောင် မောင် နဲ. သာ အော်ခေါ်နေ…….
လမ်းသွား ကိုကို မောင်မောင် တွေအားလုံး ထူးနေလိမ့်မယ်……. ကဲ ဒါဆို မောင် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အပိုင်ရပြီးပေါ့……..
မောင်ရွှေတိုက် လေတိုက်လို့ သစ်ရွက်ကြွေ
ငါကို မလို နင်ကိုလိုသောကြောင့်
ဘယ်ပြေးမလဲ မောင်ဟောင်ဟောင် သူရ….
မေဘရဏီ ဂျော်ကီလေး နှစ်ပါဖြင့်သာ..
နှစ်ပါးခွင်ကို အားရပါးက ခင်းပေတော့ဗျားးးးးးးးးးးးးးးးး
ထူးလှ ၊ ဘူးထ
မရိုးမရွ ၊ ပိုးကြွ
သွက်သွက်ခါအောင် …. သွားလေပြီ
(မှားတာရှိလျှင် ၀န္ဒာမိ …….. စိတ်ဆိုးလျှင် နှာခေါင်းချိုးခံရမယ် … စိတ်တိုလျှင် လိပ်လိုသွားရမယ် … ငှဲငှဲ )
အသဲတံခါး လိမ်ညာခေါက်ဖို့ မကြိုးစားပဲ
ကိုသူရဇော်တို့ ၊မမအိတုံ၊မမခိုင်ခိုင်တို့ ကဗျာတွေ တစ်ယောက်တစ်လှည့် စပ်
ကြရင်းနဲ့ ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဗျို့ ။
မောင် သိပ်ချစ်တဲ့ အပျိုကြီး မမ များအတွက် ကဗျာလက်ဆောင်လေးပါ…….
အုပ်ထိန်းသူ ကို အဲဒီ ကဗျာလေး ပေးလိုက်တာ တခါတည်း ခိုက်သွားတယ် ဆိုတာ သတင်းကြားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ အုပ်ထိန်းသူအား ချစ်သ၀န်လွှာ ပေးသောအခါ လက်ခံရန်အတွက် မေတ္တာသုတ်အလွတ်ကျက်ကာ ပေးခဲ့ရပါကြောင်းးးးးး
မေတ္တာသုတ် ရွတ်ပြီး အောင်ပွဲ ခံပြီးချိန်မှာတော့ လက်ရောက် အလစ်ပါသုတ် နည်းပညာကို အသုံးချ သွားတယ်မလား.. ဟိဟိ
အိမ်သာ မှာ ရုံးဆင်းချိန်ဆို ဘယ်သူမှ မရှိဘူး ဦးလေး.. သရဲမ တော့ ရှိတယ်။
လူသိပ်ရှင်းသွားရင် စိတ်ထဲက ခြောက်ခြားပြီး စိတ်ထဲမှာ ကြားကလိုလို ဒီကြားကလိုလို ထွက်ပြီး လိုက်ပို့လိမ့်မယ် တိရား။
မောင်… မောင်… မောင်… မောင် နဲ့ ကြားလိုက်လို့
ဇီး သီးသယ် လက်တွန်းလှည်း လားသလား ထွက်ကြည့်မိတယ်…..
အောင်မာအောင်မာ ရွှေတိုက်က တယ်မိုက်ပါလား
အခြော်တကောက်ကို လက်လွှဲ လက်ထဲလဲ ထည့်တတ်သကိုး
ဒါပေတည့် ကိုရင်သူရ လည်လှတာသိကြမည်ထင်ပ
အင်း … အခုတလော အမျိုးသမီးတွေ ရေးတဲ့ ကဗျာတွေကို ဖတ်ရတော့ ..
ကျနော် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကဗျာဆရာမကြီး မိကောက်ရဲ့ ကဗျာတွေကိုတောင် သွားပြီး သတိရမိသေးတယ် … ။
ကြုံတုံး မိကောက်ရဲ့ ဖြောင့်ချက်ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ဝင်ပွားသွားပါတယ် ခင်ဗျာ …
ကျနော် ကံနိမ့်ခဲ့ပါတယ် … ။
အော်ကြောင်ဖက်တီးများ အရင်မှတ်ပုံတင်ထားတယ် သတင်းစာမှာ သူ့ “ညောင်”ကို အတုအပမလုပ်ရဆိုပဲ။
ချစ်ရင်ထူးရေ ဟုတ်တယ်။ ပြောတဲ့စကားကြိုက်သွားပြီ။ တခြားရွာသူတွေလဲပြောလိုက်ပါ။ စိမ်းကားပြီး ပစ်ထားခဲ့သူတွေကို အဲလိုစစ်ကြေညာသင့်တာလို့။ နည်းလမ်း ရသွားတယ်။ သယ်ရင်း တွေလဲ ကဗျာနဲ့အားပေးလိုက်မယ်။
“မောင်” ဆိုလို့ .. အဲလို ခေါ်တတ်တဲ့ … အဋ္ဌမ မြောက် တစ်ယောက် ကိုသွားသတိရသွားပြီ …..
Mလုလင် ရဲ့အသည်းလဲ ပြတိုက်ပို့သင့်ပြီ။ ကျောက်တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့။
အကုန်လုံး “မောင်” ဖြစ်ကုန်ပြီပဲ…..
သူများတွေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တို့ကတော့်….”ညောင်”ပဲ
အတုအပ ဆင်တူယိုးမှား သတိပြုကြပါ…